Ukuze ukuhlaziywa ukuhweba umsebenzi wamabhizinisi kubalulekile ukusebenzisa amasu eziyinkimbinkimbi, okuyinto inzuzo kwezomnotho sikhombisa umthetho esiyimbangela zonke inqubo ekukhuleni wenkampani. Kulokhu-ke kuyadingeka ukuhlela amamethrikhi enemininingwane ukuthi ukunquma ukuthi kusebenza ukusebenza kwaso sonke isimiso sezinto yayo.
Njalo inkampani izisethile iqoqo imisebenzi zamasu kanye Tactical, okufanele kuqinise ukuqaliswa sokukwazi ukuncintisana ezingeni lamazwe eside futhi unikeze inkomba ukuphathwa okuyimpumelelo inzuzo kwezomnotho. Distribution inethiwekhi (ngemuva kwalokhu RTD) amabhizinisi nazo kungenzeki esikhaleni nje futhi akuyona imfanelo esiyisibopho umsebenzi, futhi aba amaSheshi, iyindaba amasu marketing bekuhlela ne ukufunda ukusebenza kwe-ukusatshalaliswa nentengo inqubomgomo. Ngakho-ke, ukuthuthukiswa SCC ibhizinisi kumele ihlangabezane imigomo ethile futhi RTD kufanele ngokucacile afeze imisebenzi yawo ngokupheleleko. Ngokwesibonelo, kwezomnotho inzuzo yebhizinisi kuyinto eduze okuhlobene ikhwalithi SCC, njengoba isici ukuthi odlulela izimiso ezilandelayo yenhlangano yayo:
1) imisebenzi yezihloko RTD zabo okuhloswe ngaso okwenza nekusebenta yokuthengisa nokuqinisekisa eside ukuncintisana inkampani ;
2) ngendaba RTD ayo Positioning ngokwabo njengoba abameleli ezisemthethweni inkampani umzali, ukuhambisana kanye libeke izakhi ungubani yenkampani ;
3) Izikhonzi inethiwekhi ukusatshalaliswa kuqinisekisa ileveli enkulu service amakhasimende, umsebenzi olunzulu ukuze alondoloze futhi sidonsele yangempela engaba abasebenzisi ekupheleni ikhanda ebhizinisini.
4) izihloko sokusakaza wenziwa nokubika nyangazonke amafomu ohambelana, inhloko manje isakhiwa;
5) Izikhonzi RTD siqu ukwenza izibonelo zalokho nyangazonke futhi ukukhokhelwa imikhiqizo saziso senenziwe kuhambisana inkampani umzali quota nyangazonke ngomkhiqizo ukusetshenziswa;
6) Ngokuphathelene nezikhonzi inethiwekhi ukusatshalaliswa banamathela inkampani umzali izindlela ezihlongozwayo zokuqondisisa ezingeni izintengo abathengi;
7) Izikhonzi RTD siqu ngokuvumelana inkampani umzali kumele ukuthuthukisa ingqalasizinda ezifanele kubandakanya isitoreji kanye namahhovisi, ukuhlinzeka ukwaneliseka ephelele kunayo nezidingo zamakhasimende inhloko ibhizinisi;
8) inzuzo kwezomnotho kanye nokubiza imikhiqizo kwakhiwa ngokuhambisana nemithetho yezwe lapho inhlangano isebenza RTD ayo;
9) izihloko RTD siqu banamathela endaweni okuvunyelwene umthwalo wemfanelo oyinhloko kokusebenza.
Izikhonzi RTD ngekwato ezingaphansi, ukuhweba izindlu, amahhovisi omele noma amagatsha, kule ndaba, kufanele ngokuyinhloko ukugxila eziseqhulwini inkampani umzali. umnotho High kufanele kube inhloso yabo Tactical umsebenzi yokuthengisa imikhiqizo ngempumelelo enkulu, kanye main umsebenzi amasu - kumiswa sokukwazi ukuncintisana ezingeni lamazwe eside wenkampani umzali. Njengoba izikhonzi TPS zabo Positioning ngokwabo njengoba abameleli esemthethweni inkampani, banayo ukumelana kuzo zonke izingxenye isitayela yenkampani, ikakhulukazi uma ugcina ezingeni kahle inkomba njengenhlangano inzuzo kwezomnotho. Futhi ukuze kwakhiwe isithombe evumayo of inkampani umzali RTD abadlali kumele afeze iqoqo ukumaketha imisebenzi okucitshwayo counterparties.
Ukuze sinikeze njengoba lokuqapha real-time, kanye umbono jikelele lwamasu amathemba ukuthuthukiswa ezimakethe okubhekiswe izifunda, RTD izinhlangano ukunikeza amafomu okubika njalo sivunyiwe. PERIODICITY lokubika, futhi ezakheke, njengoba umthetho, kugunyazwe kusengaphambili, inqobo nesidingo esiphuthumayo ukugcinwa kolwazi, RTD abadlali kufanele ucele inhloko inkampani umzali ukuhlinzeka ulwazi oludingekayo. Futhi, omunye yezinjongo eziyinhloko wukuhlinzeka TPN izihloko inkonzo esiphezulu amakhasimende sangempela abangaba, ngaphandle kwalokho ukudala TPN kungenzeka kulingane hhayi kuphela kodwa akuyona kwezomnotho ingenzeka. Izihloko RTD kufanele kubhekwe futhi zihlole izidingo nokwaneliseka kwamakhasimende esifundeni, ukwakha nokulondoloza ikhasimende base ukwakha ubuhlobo ukwethenjwa ukwethula amafomu amasha oluhambelana nezindlela zokubambisana namakhasimende.